အပြောင်းအရွှေ့ကာလမပိတ်သိမ်းခင် စောင့်ကြည့်သွားရမယ့် ကစားသမားများ
31 Aug 2018 . 3:32 PM
ဥရောပဘောလုံးလောကရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကာလဟာ ဒီနေ့ညမှာပိတ်သိမ်းတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့ပိတ်သိမ်းခါနီးမှာ ပရိသတ်တွေမထင်မှတ်တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့တွေဟာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာကလည်း အစဉ်အလာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ။ အခု ပရိသတ်တွေအတွက် အပြောင်းအရွှေ့ကာလမပိတ်သိမ်းခင် အသင်းပြောင်းရွှေ့နိုင်ခြေရှိတဲ့ ကစားသမားတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ရာကီတစ် Rakitic
အသက်(၃၀)အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ ဘာစီလိုနာကွင်းလယ်လူ ရာကီတစ် Rakitic ကို PSG အသင်းကခေါ်ယူဖို့ပစ်မှတ်ထားနေတာပါ။ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ဗီဒယ်လ် Vidal နဲ့ အာသာ Arthur တို့ရောက်ရှိလာတာကြောင့် ရာကီတစ် Rakitic ဟာ အသင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရဖို့ရှိနေသူပါ။ PSG အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူ ရာဘီယူ Rabiot ရဲ့အနာဂတ်ဟာလည်း တိကျတဲ့အဖြေမထွက်သေးတာကြောင့် PSG အသင်းဟာ ရာကီတစ် Rakitic ကို ခေါ်ယူလိုနေတာပါ။
(၂) ဂျရုန်းဘိုတန် Jerome Boateng
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနောက်ခံလူ ဂျရုန်းဘိုတန် Jerome Boateng ကိုလည်း PSG အသင်းကခေါ်ယူဖိုချိတ်ဆက်နေတာပါ။ ဂျရုန်းဘိုတန် Jerome Boateng ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဟာ ဖြစ်ပေါ်လာမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
(၃) ကာဂါဝါ Kagawa
ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ ဂျပန်ကွင်းလယ်ကစားသမား ကာဂါဝါ Kagawa ကို မာဆေးလ်နဲ့ဆီဗီလာအသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ ဒေါ့မွန်အသင်းကို ကွင်းလယ်လူတွေဖြစ်ကြတဲ့ ၀စ်ဆဲလ် Witsel ၊ ဒီလေးနီ Delaney တို့ရောက်ရှိလာတာကြောင့် ကာဂါဝါ Kagawa အတွက်ပွဲထွက်ခွင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ လိုက်ပ်ဇစ်နဲ့ပွဲမှာလည်း အသင်းရဲ့လူစာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့် အခုလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။
(၄) မာခီစီယို Marchisio
ဂျူဗင်တပ်စ်ကစားသမားဟောင်း ၀ါရင့်ကွင်းလယ်လူ မာခီစီယို Marchisio ဟာဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပြီး အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေသူပါ။ မာခီစီယို Marchisio ကိုပေါ်တူဂီနာမည်ကြီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ပေါ်တို၊ဘင်ဖီကာ တို့ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာကြောင့် မာခီစီယို Marchisio ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ပေါ်လာမလား ဆိုတာစောင့်ကြည့်သွားရမှာပါ။
(၅) မာကိုဗစ် Markovic
မာကိုဗစ် Markovic ဟာ လီဗာပူးလ်ကစားသမားဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပေမယ့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထဲက အသင်းမှာကစားခွင့်မရတော့ဘဲ အငှားတွေနဲ့သာ အသင်းပေါင်းစုံမှာကျင်လည်နေရသူပါ။ လက်ရှိမှာတော့ မာကိုဗစ် Markovic ကိုခေါ်ယူဖို့ PAOK နဲ့ အန်ဒါလက်ခ်ျအသင်းတွေက စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
(၆) လောဖ့်တပ်ချိခ် Loftus-Cheek
လောဖ့်တပ်ချိခ် Loftus-Cheek ဟာ ခြေစွမ်းကောင်းမွန်ပေမယ့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာတော့ ပုံမှန်နေရာအတွက် ခက်ခဲနေသူပါ။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာ ယော်ဂျင်ဟို Jorginho ၊ ကွန်တေ Kante ၊ ဘာကလေ Barkley ၊ ကိုဗာချစ် Kovacic တို့ရှိနေတာကြောင့်လည်း လောဖ့်တပ်ချိခ် Loftus-Cheek ဟာ ကံမကောင်းသူလို့ဆိုရမှာပါ။ လောဖ့်တပ်ချိခ် Loftus-Cheek ကို ခေါ်ယူဖို့ မိုနာကိုနဲ့ ရှော်လ်ကေးအသင်းတွေက ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
(၇) ဟာမိုဆို Hermoso
အက်စပန်ညိုအသင်းရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူ ဟာမိုဆို Hermoso ကိုခေါ်ယူဖို့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းက စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ရဲ့ လူငယ်ကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူ ဟာမိုဆို Hermoso ဟာ အက်စပန်ညိုအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့တုန်းက စာချုပ်ထဲမှာ buy back clause ပါဝင်နေတာကြောင့် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေဟာ အပြောင်းအရွှေ့ကာလမပိတ်သိမ်းခင်မှာ အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့တွေဖြစ်ပေါ်လာမလားဆိုတာကိုတော့ အပြောင်းအရွှေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ရင်ခုန်သွားကြရမှာပါ။
Photo: CryptoCashEasy.com EN , Big World News ,besthqwallpapers , YouTube , Univision , 10z Soccer . 4Jewish.com
အပွောငျးအရှကေ့ာလမပိတျသိမျးခငျ စောငျ့ကွညျ့သှားရမယျ့ ကစားသမားမြား
ဥရောပဘောလုံးလောကရဲ့ အပွောငျးအရှကေ့ာလဟာ ဒီနညေ့မှာပိတျသိမျးတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ အပွောငျးအရှပေိ့တျသိမျးခါနီးမှာ ပရိသတျတှမေထငျမှတျတဲ့ အပွောငျးအရှတှေ့ဟောဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတာကလညျး အစဉျအလာတဈခုလိုဖွဈနပေါပွီ။ အခု ပရိသတျတှအေတှကျ အပွောငျးအရှကေ့ာလမပိတျသိမျးခငျ အသငျးပွောငျးရှနေို့ငျခွရှေိတဲ့ ကစားသမားတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၁) ရာကီတဈ Rakitic
အသကျ(၃၀)အရှယျရှိပွီဖွဈသူ ဘာစီလိုနာကှငျးလယျလူ ရာကီတဈ Rakitic ကို PSG အသငျးကချေါယူဖို့ပဈမှတျထားနတောပါ။ ဘာစီလိုနာအသငျးကို ဗီဒယျလျ Vidal နဲ့ အာသာ Arthur တို့ရောကျရှိလာတာကွောငျ့ ရာကီတဈ Rakitic ဟာ အသငျးမှာပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့အတှကျ တိုကျပှဲဝငျရဖို့ရှိနသေူပါ။ PSG အသငျးရဲ့ကှငျးလယျလူ ရာဘီယူ Rabiot ရဲ့အနာဂတျဟာလညျး တိကတြဲ့အဖွမေထှကျသေးတာကွောငျ့ PSG အသငျးဟာ ရာကီတဈ Rakitic ကို ချေါယူလိုနတောပါ။
(၂) ဂရြုနျးဘိုတနျ Jerome Boateng
ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးနောကျခံလူ ဂရြုနျးဘိုတနျ Jerome Boateng ကိုလညျး PSG အသငျးကချေါယူဖိုခြိတျဆကျနတောပါ။ ဂရြုနျးဘိုတနျ Jerome Boateng ရဲ့အပွောငျးအရှဟေ့ာ ဖွဈပျေါလာမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါ။
(၃) ကာဂါဝါ Kagawa
ဒေါ့မှနျအသငျးရဲ့ ဂပြနျကှငျးလယျကစားသမား ကာဂါဝါ Kagawa ကို မာဆေးလျနဲ့ဆီဗီလာအသငျးတှကေချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားနကွေပါတယျ။ ဒေါ့မှနျအသငျးကို ကှငျးလယျလူတှဖွေဈကွတဲ့ ဝဈဆဲလျ Witsel ၊ ဒီလေးနီ Delaney တို့ရောကျရှိလာတာကွောငျ့ ကာဂါဝါ Kagawa အတှကျပှဲထှကျခှငျ့အခကျအခဲတှဖွေဈပျေါလာခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ လိုကျပျဇဈနဲ့ပှဲမှာလညျး အသငျးရဲ့လူစာရငျးမှာပါဝငျခဲ့ခွငျးမရှိတာကွောငျ့ အခုလိုသတငျးတှထှေကျပျေါလာခဲ့တာပါ။
ဂြူဗငျတပျဈကစားသမားဟောငျး ဝါရငျ့ကှငျးလယျလူ မာခီစီယို Marchisio ဟာဂြူဗငျတပျဈနဲ့ လမျးခှဲခဲ့ပွီး အသငျးလကျမဲ့ဖွဈနသေူပါ။ မာခီစီယို Marchisio ကိုပျေါတူဂီနာမညျကွီးအသငျးတှဖွေဈတဲ့ ပျေါတို၊ဘငျဖီကာ တို့ကချေါယူဖို့စိတျဝငျစားနတောကွောငျ့ မာခီစီယို Marchisio ရဲ့အပွောငျးအရှဖွေ့ဈပျေါလာမလား ဆိုတာစောငျ့ကွညျ့သှားရမှာပါ။
(၅) မာကိုဗဈ Markovic
မာကိုဗဈ Markovic ဟာ လီဗာပူးလျကစားသမားဖွဈနဆေဲဖွဈပမေယျ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈထဲက အသငျးမှာကစားခှငျ့မရတော့ဘဲ အငှားတှနေဲ့သာ အသငျးပေါငျးစုံမှာကငျြလညျနရေသူပါ။ လကျရှိမှာတော့ မာကိုဗဈ Markovic ကိုချေါယူဖို့ PAOK နဲ့ အနျဒါလကျချြအသငျးတှကေ စိတျဝငျစားနကွေပါတယျ။
(၆) လောဖျ့တပျခြိချ Loftus-Cheek
လောဖျ့တပျခြိချ Loftus-Cheek ဟာ ခွစှေမျးကောငျးမှနျပမေယျ့ ခယျြလျဆီးအသငျးမှာတော့ ပုံမှနျနရောအတှကျ ခကျခဲနသေူပါ။ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ကှငျးလယျမှာ ယျောဂငျြဟို Jorginho ၊ ကှနျတေ Kante ၊ ဘာကလေ Barkley ၊ ကိုဗာခဈြ Kovacic တို့ရှိနတောကွောငျ့လညျး လောဖျ့တပျခြိချ Loftus-Cheek ဟာ ကံမကောငျးသူလို့ဆိုရမှာပါ။ လောဖျ့တပျခြိချ Loftus-Cheek ကို ချေါယူဖို့ မိုနာကိုနဲ့ ရှျောလျကေးအသငျးတှကေ ချေါယူဖို့စိတျဝငျစားနကွေပါတယျ။
အကျစပနျညိုအသငျးရဲ့လူငယျနောကျခံလူ ဟာမိုဆို Hermoso ကိုချေါယူဖို့ ရီးယဲလျမကျဒရဈအသငျးက စိတျဝငျစားနပေါတယျ။ ရီးယဲလျမကျဒရဈရဲ့ လူငယျကစားသမားဟောငျးဖွဈသူ ဟာမိုဆို Hermoso ဟာ အကျစပနျညိုအသငျးကို ပွောငျးရှတေု့နျးက စာခြုပျထဲမှာ buy back clause ပါဝငျနတောကွောငျ့ ရီးယဲလျမကျဒရဈအသငျးကို ပွနျလညျရောကျရှိလာမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ကွရမှာပါ။
အခုဖျောပွပေးခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှဟော အပွောငျးအရှကေ့ာလမပိတျသိမျးခငျမှာ အပွောငျးအရှဖွေ့ဈပျေါလာနိုငျတဲ့ ကစားသမားတှဖွေဈပါတယျ။ မထငျမှတျထားတဲ့ အပွောငျးအရှတှေ့ဖွေဈပျေါလာမလားဆိုတာကိုတော့ အပွောငျးအရှရေဲ့ နောကျဆုံးအခြိနျထိ ရငျခုနျသှားကွရမှာပါ။
by Naing Linn . 54 mins ago